Soo-saareyaashu waxay awood u yeelan doonaan inay ku iibiyaan rukumo gudaha Kooxaha Microsoft ee ku jira Mac | Waxaan ka socdaa mac
Microsoft ayaa ku dhawaaqday in labada API ee ugu muhiimsan, sida keydka kooxaha iyo agabyada wada shaqeynta arjiga, durba way furanyihiin loogu talagalay horumariyeyaasha u baahan. Iyo kuwa doonaya inay ka faa'iideystaan ​​fursadda barnaamijka Mircrosoft. Noocyada noocan ah ee codsiyada waxay noqdeen kuwa aad caan u ah oo ka dhex jira faafida. Waxayna noqdeen kuwo lama huraan u ah xaalada kala fogaynta bulshada.
Tan iyo markii ay shirkaddu ku dhawaaqday barnaamijyada dhinac saddexaad ee Kooxaha sanadkii hore, horumariyayaashu waxay abuureen qalab si ay uga faa'iidaystaan ​​barnaamijka. Sida laga soo xigtay qarka u saaran, horumariyayaal ugu dhakhsaha badan waxay awoodi doonaan inay abuuraan codsiyo Waxay ku xirmaan shaashadda kulanka, iyagoo ku iibsanaya abka ama rukhsad, iyo xitaa inay abuuraan barnaamijyo keli keli ah oo marin u hela marinnada maqalka-fiidiyowga waqtiga dhabta ah.
Jeff Teper, madaxa iskaashiga ee Microsoft 365 ayaa yiri: Haddii aad abuuri karto codsiyada shabakadda, waxaad abuuri kartaa fidinno ku saabsan wada sheekaysiga Kooxaha, kanaalada iyo shirarka. "Waad isku ururin kartaa hal mar, waad wadi kartaa, meel walbana waad geyn kartaa." Barnaamijyada loo dhisay Kooxaha waxay ka shaqeyn doonaan dhammaan barnaamijyada, oo ay ku jiraan macOS laakiin sidoo kale iOS.
Microsoft ayaa iyaduna bilaabaysa Falanqeyn taasi waxay u oggolaan doontaa horumariyeyaasha inay si toos ah ula wadaagaan codsiyada aagga kulanka. Isku dhexgalka Visual Studio iyo Visual Studio Code sidoo kale way fududahay hadda. Dabayaaqada xagaagan, shirkaddu waxay u oggolaan doontaa codsiyada dhinac saddexaad inay helaan marinnada maqalka iyo muuqaalka ah waqtiga dhabta ah. Horumariyayaashu sidoo kale waxay awoodi doonaan inay ku iibiyaan rukhsadooda gaarka ah codsiyadooda.
Qof ma abuuri karaa codsi gabi ahaanba la shakhsiyeeyey. Ka yeel mid ka duwan isku-xirnaanta adeegsadaha Kooxaha iyo abkaas wuxuu kula fal-geli karaa Kooxaha cod, muuqaal, ama sheekeysi. "
Heshiiska Microsoft wali wuu shaqeynayaa sidaa darteed meesha kama saarayno warar badan oo la xiriira Apple. Ilaa May 27th.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Soo-saareyaashu waxay awood u yeelan doonaan inay ku iibiyaan rukumo gudahood Kooxaha Microsoft ee Mac-ga ah
Netflix waxay baraneysaa suurtagalnimada bixinta rukunka ciyaarta oo la mid ah Apple Arcade